Lalao Manerantanin’ireo Kirgizy Mpifindrafindra Monina sy Ilay Mpitifitra Zanatsipika Faran’izay Pelika Ary Naharomotra Ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Lalao Manerantanin'ireo Kirgizy Mpifindrafindra Monina sy Ilay Mpitifitra Zanatsipika Faran'izay Pelika Ary Naharomotra Ny Aterineto
Voadika ny 02 Oktobra 2016 6:23 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Tetun, Español, বাংলা, Ελληνικά, Italiano, English
Dika natao tamin'ny photoshop an'i TASS/Getty; sarin'i Chynara Madmikulova mampiasa ny tongony amin'ny fitifirana amin'ny zanatsipika. Sary nampiasaina tao amin'ny Kloop.kg. Creative Commons
Ankehitriny, manjolofotra indray ny vovoka eo amin'ireo Lalao Manerantanin'ireo Mpifindrafindra Monina mahazendana natao tao Kirgizistana ny 3-8 Septambra lasa teo, manomboka manontany tena ireo olona sasantsasany raha toa mendrika nandaniana izany vola izany ny hetsika iray nitondràna solontenam-pirenena maherin'ny 40 mifaninana amina fanatanjahantena maherin'ny 20 nentin-drazana Euraziana.
Tsy mbola nampatsiahy ny governemanta Kirgizy hoe ohatrinona ny vola laniny tamin'ireo Lalao Erantanin'ireo Mpifindrafindra Monina – sady nitàna toerana lehibe tamin'ireo lalao ihany koa ireo mpamatsy vola – saingy avy amin'ireo vaovao azo no nahalalàna fa, nihoatran'ny 20 tapitrisa ny tontalimbidin'izy ireo.
Ho an'ny firenena iray mahantra ahitana tatitra mikasika ny tsy fahampiana boky fianarana ary koa ny trosa ivelany mampanahy, na dia dolara an-tapitrisa vitsivitsy monja aza dia heverina ho tena volabe.
Saingy nony avy eo, ireo lalao nanjary lasa fanatanjahantena tsy mampino nisy endrika mampiseho firenena iray izay somary tsy dia fantatra loatra tany amin'ilay faritra sarotra nidirana tao amin'nyu firaisana Sovietika taloha ao Azia Afovoany.
Nandritra ny herinandro iray, fara-fahakeliny, nandrakotra ireo lalao nitranga tao amoron'ny farihy Issyk-Kul ao Kirgizistana foana ireo media eran'izao tontolo izao, niaraka tamin'ny fandokandokafan'ilay tabloid Sun ao Angletera hoe: Akrobaty mpitifitra zanatsipika sy Lehilahy Nampivanàka Vahoaka Tao amin'ireo Lalao Erantanin'ireo Mpirenireny tao Kirgizistana.
Mahaliana manokana ho an'ny Sun, sy ireo media hafa maro, Twitter ary vondrom-piarahamonina tamin'ny tambajotra Reddit ny zavabitan'i Chynara Madimkulova, tamin'ny fampiasàna zanatsipika amin'ny tongotra ka nahavoa ny lasibatra nefa mitondra tehina.
Lehilahy miresaka ao amin'ny aterineto: “Ambany ireo vehivavy raha oharina amiko”
Madmikulova, manan-talenta tokoa, izay azon'ny mpaka sarin'ny masoivohom-baovaon'i Tass avy any Rosia teny an-tsefantsefany teny, dia zara raha ho azo atao dokambarotra tsara ho an'i Kirgizistana.
Nahazo famerenana bitsika an'arivony teo amin'ny Twitter ilay sary ary tafakatra teo amin'ny pejy voalohan'ny Reddit, mitondra faharomotana amin'ny fanaovana photoshop ho an'ireo redditors izay voarakitra tamin'ny gazetin'i Kirgizy tamin'ny alalan'ny media Kloop.kg avy eo:
Sary noforonin'i Mal3ficent mpampiasa Reddit
Adrienne Mayor Akademika, izay mpanoratra ny boky Ireo Amazona: Fiainana sy Tantaran'ireo Vehivavy Mpiady Namakivaky ny Tontolo Fahagola [Ang.], dia nanamarika ireo fototrara-tantara mikasika ny zavabitan'i Madmikulova:
@simplic10 @semiotechnic fombandrazana fahin'ireo #AkrobatyMpitifitraZanatsipika mpifindrafindra monina mba hamoihorohoroana ireo fahavalony miaraka amin'ny fitaingenana soavaly sy fahaizana mitifitra amin'ny zanatsipika, tsy ho an'ny ady akory
Mihoatra noho ireo firenena jadona mpifanolo-bodirindrina aminy, nanao ezaka i Kirgizistana mba hampiroboroana ny sehatra fizahantany ao aminy.
Ireo fandraisana andraikitra toy ny Fizahantany Mifototra amin'ny Vondrom-piarahamonina eny Ifotony – tambajotra iray ahitàna ireo birao mpandrindra ny fampiantranoana ireo faritra ambanivohitry ny firenena – ary ny politika iray an'ny governemanta hanaisotra ireo rafitra momba ny fakàna fahazoandàlana miaraka amin'ireo firenena manodidina ny 30, dia nahazo vokatra tamin'ny fitomboana haingana teo amin'ny isan'ireo vahiny mpitsidika.
Ny fotoana ihany no hany tokana hanambara raha toa tranga lafo vidy tsy mahazatra natao hahasarika ireo Lalao Erantanin'ireo Mpifindrafindra Monina, na teboka miavaka mendrika an'ity dia ity.
Tantaran'ny Fanatanjahantena farany
04 Jolay 2021Karaiba